ပန်ဒိုရာ: ကိုဖိုးရမ် မဘလောက်
Posted by pandora at 5:36 PM
မပန်ကြီးရယ် ပေါက်ပေါက်ရယ်တဲ့ရှာရှာ.. တိုတိုရမ်နဲ့ လောက်လေးတဲ့ ခွစ်ခွစ်.. နောက်ထပ်တူတို့ မှာ ဆီဗုံးလို့ခေါ်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေမွေးပေးနော်.. ကွိကွိ
ဒါတွေပြောတာပေါ့... ကီးဘုတ်ရိုက်ရာ စာဖြစ်တယ်ဆိုတာ.. :P
ဒါနဲ့စကားမစပ် အနော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း ဘလောက်အေ့ခ်ျ လုပ်ကျမလို့ကူညီးအုန်းနော်.. ကွိကွိကွိကွိက
ကိုဖိုရမ်နဲ့ မဘလောက်တဲ့။ ဘယ်သူ့စောင်းပြောသလဲတော့သိဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးညက်တော့ ဖတ်လို့ကောင်းမှကောင်း။ ရယ်လိုက်ရတာ … ။
ဆရာကြီး တက်တိုးကပြောခဲ့တယ် စာကောင်းပေကောင်းတို့မည်သည် ဖတ်လိုက်ရသူအဖို့ ငါ့အကြောင်းလား သူ့အကြောင်းလား ဟု ထင်သွားစေသည်တဲ့။ ပန်ဒိုရာလည်း စာကောင်းပေကောင်းများ ဖြစ်မလားလို့ အဲဒီကတည်းက ဟိုစောင်းဒီမြောင်း ရေးလာလိုက်တာ။ အဲလေ.. ဟုတ်ပါဝူး.. မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ.. တိုက်ဆိုင်မှုရှိကခွင့်လွှတ်ပါလို့.။ ဟတ်ဟတ်
သိပ်သိပ်ကောင်း ရီရတယ်ဗျို့ ။
အောင်ညလေး.. ဘလောဂ်အေ့ခ်ျ လုပ်ရတာ မလွယ်ပါလားနော် ။
ဘာညာ.. ငါ့ညီမ.. ချိတ်ကူးမလွဲနဲ့နော် အဟတ် ။
တကယ်ဗျာ.. ပမန်ဒိုရာ.. ဟားဟား.. ရယ်ရတယ်
ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရှာရှာ ဗျာ..
ဘလောဂ်အေ့ခ်ျလုပ်ချင်တယ်ဗျိုး.... မကြီးပန်..ကူညီပေးပါ... ဟီးဟီး
နှစ်ထပ်ရှိ မှတ်မိဆိုသလို.. နောက်တစ်ခေါက်လာထပ်ဖတ်တာ...။ အရမ်းကောင်းတယ်။ အရေးအသားညက်တယ်။ ဇာတ်သိမ်းလေးလည်း လှတယ်...။ မကြီးပန်က တကယ့်စာရေးဆရာမကြီးပဲဗျ...။
ကျွန်တော် တော် တော် သဘော ကျ တယ်ဗျ..။ ဆရာ မင်း လူ ရဲ့ တပည့် လား ပန် ဒိုရာ ... =)
Hi sis pan,
A very good longitudinal thinking on advanced www technology. Carry on! :p
ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ ဒီ စာက ဟာသ သက်သက်ထက် Virtual သမိုင်းတစ်ခု ပေါ်မှာ အရှိန်နှင့် စီးဆင်းစပြု နေပြီ ဖြစ်သည့် မြန်မာ ဘလော့(ဂ) ရေးသူ များ ၏ ဖြတ်သန်းနေရသော ခေတ်တစ်ခေတ် ကို ပေါ့ပေါ့ပါး ပါးရေးချက် နှင့် မှတ်တမ်းတင်ထား သည့် တန်ဖိုးရှိသည့် စာကောင်း တစ်ခု လို့ မြင်ပါသည်။
အဆုံး က ယိ(စ်) ဆိုတဲ့ လေသံ လေး ကတော့ စာကောင်းတွေ တင်ဆက်နေတဲ့ ကိုစေးထူး ရဲ့ ဘလော့(ဂ) ကို ဖျတ်ခနဲ မြင်ယောင်မိပါတယ် 
azure ရေ... မပန်က ဆရာမင်းလူ့ တပည့်မဟုတ်ဘူး၊ ဆရာမင်းလူက မပန့်ရဲ့ တပည့်။ (ဟီး... ဒီတစ်ခါက အသားလုံးကြော် မျက်နှာ...)
မပန်ရေ... ဒီစာဖတ်ပြီး ကြားဖူးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့ ယှဉ်လို့ ဟောဒီ စကားလုံး ခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်...
"'ချက်ကျ လက်ကျ ပေါက်ကရ' ရေးခြင်း၏ အနုပညာ" တဲ့...
=) ပြောင်မြောက်ပါပေတယ်ဗျာ၊ (အသားလုံးကြော် ကျန်သေးလားဗျို့။ :D)
ဟီးဟီး တစ်ကယ်ရီ ရတယ်။ :P
ဘယ်လို ကျော်သွားလဲ မသိဘူး၊ အခုမှ ဖတ်မိတယ်။ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ မပန်ဒိုရာရယ်။ ကျွန်တော်တို လင်မယားကို စောင်းပြောနေသလိုပဲ။
အထက်မှာ ``စာကောင်းပေကောင်းတို့မည်သည် ဖတ်လိုက်ရသူအဖို့ ငါ့အကြောင်းလား သူ့အကြောင်းလား ဟု ထင်သွားစေသည်´´ လို့ ဆိုထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
စာရေးရာတွင် အကျင့်ခြင်း တူတယ်လို့ ထင်တယ်။
ဒီနေ့မှ သေချာ ၀င်ဖတ်ဖူးတာ
ကိုဖိုးရမ် မဘလောက် တို့ကို စိတ်ထဲတွင်
ကျွန်တော်က Jokes နဲ့ Satire တွေကို
ကျွန်တော့ Satire တွေကို လာဖတ်ပြီး
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဝတ္တုတို အဲ ဟုတ်ပါဘူး ဘလောက် ။ ရေးထားတာကကြာပြီပဲ ကျွန်တော်ဖတ်တာနောက်ကျနေပြီ။ နောက်ထပ်တင်ပေးဦးနော်။
ရေးတက်လိုက်တဲ့ ကတွတ်ပီ လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေဘီဗျ။
“ကိုဖိုးရမ် မဘလောက်” နာမည်ပေးထားပုံလေး ကတော့ မိုက်မှမိုက်.. ဒီ Post လေးလာဖတ်ဘို့ ဖိတ်ခေါ်လို့လည်း ကျေးဇူးအထူးပါ.. ပျော်ရွှင်တတ်သူချင်းမို့ ခင်မင်မိပါတယ်..
အနော်နဲ့ ခင်လေး Blog အတူလုပ်ဖြစ်ပုံ Post လေးတော့ ဖတ်ပြီးသွားပြီထင်တယ်.. :P
နောက်လည်း အမြဲလာဖတ်မယ် လာပြုံးမယ်.. Link ထားလိုက်မယ်..